မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူတော်တော်များများသတိမထားတဲ့ အရာတစ်ခုကို မေးခွန်းထုတ်လာတဲ့ ကျော်ကျော်ဗိုလ် – အနုပညာရပ်ဝန်း
ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗွီဒီယိုသရုပ်ဆောင်မင်းသားချော ကျော်ကျော်ဗိုလ်ကတော့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ သူ့ရဲ့အတွေးတချို့နဲ့ တနေ့တာအကြောင်းအရာတွေကို မျှဝေလေ့ရှိသူပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကားကို ငယ်ငယ်ကတည်းသင်ခဲ့ရသလို နေ့စဉ်လည်း အသုံးပြုနေကြပေမယ့် လူတော်တော်များမျာ သတိမထားမိတဲ့အရာလေးကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
” “အ” အက္ခရာဟာ မြန်မာဗျည်းတွေထဲမှာ နောက်ဆုံးအက္ခရာ ဆိုပေမယ့် … အမည်နာမ တော်တော်များများရဲ့ရှေ့မှာ သုံးစွဲကြတာဘာကြောင့်ပါလဲ …? အဓိကအရောင် အခေါ်အဝေါ်တွေထဲမှာလည်း သူပါတယ်…. အဖြူ၊အနီ၊အညို၊အပြာ၊ အဝါ၊အစိမ်း၊ အနက် …မိသားစုအခေါ်အဝေါ်တွေထဲမှာလည်းသူပါတယ်…. အဖိုး၊အဖွား၊အဖေ၊အမေ၊အဒေါ်၊အကို၊အမ …ဆန့်ကျင်ဘက်အခေါ်အဝေါ်တွေထဲမှာလည်း သူပါတယ်… အတက်၊အဆင်း၊အချစ်၊အမုန်း၊အမြင့်၊အနိမ့်၊အပူ၊အအေး၊အပေး၊အယူ၊အနီး၊အဝေး၊အမေး၊အဖြေ….. အာရုံငါးပါးလည်း သူပဲ…. အမြင်၊အကြား၊အနံ၊အတွေ့အထိ၊အတွေး…. ကဲ… ဘာကြောင့် “အ” က အဲ့လောက်အထိ
အရေးပါနေရသလဲ ? ကျွန်တော့်ကိုရှင်းပြပါလား ?…ခင်ဗျားတို့ရဲ့ … အတွေးအခေါ်၊အယူအဆ၊အကြားအမြင် အတွေ့အကြုံ အရ အဆင်ပြေရင်သိချင်ပါတယ်” ဆိုပြီး “အ” နဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…
မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကားကတော့ တကယ်ကို ရှုပ်ထွေးခက်ခဲတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုဆိုတာတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း သိကြမှာပါ.. နေ့စဉ်ပြောနေကျပေမယ့် ကျော်ကျော်ဗိုလ် ထောက်ပြခဲ့တဲ့အရာလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတိထားမိခဲ့ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်… စကားလုံးတော်တော်များများမှာ ပါတဲ့ “အ” အက္ခရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်ကြီးမှာ အဖြေလေးများရှိရင် မှတ်ချက်ပေးမျှဝေခဲ့ပါဦးနော်။
ဆယ်တန်း မအောင်ပေ မယ့် မိဘ ကို လုပ်ကျွေးနိုင် တယ် ဆိုတဲ့ ရွှေမှုံ(ရုပ်သံ)